दरबार हत्याकाण्ड रुपमा परिचित तत्कालीन राजपरिवारको नरसंहार गरिएको आज १८ वर्ष पुगेको छ! – " कञ्चनजंगा News "
दरबार हत्याकाण्ड रुपमा परिचित तत्कालीन राजपरिवारको नरसंहार गरिएको आज १८ वर्ष पुगेको छ!
No Comments on दरबार हत्याकाण्ड रुपमा परिचित तत्कालीन राजपरिवारको नरसंहार गरिएको आज १८ वर्ष पुगेको छ!
१९ जेठ नेपालको राजनीतिक इतिहासै ठूलो हत्या काण्डका रुपमा परिचित तत्कालीन राजपरिवारको नरसंहार गरिएको आज १८ वर्ष पुगेको छ। राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारका १० सदस्यको हत्या १९ जेठ २०५८ मा भयो, जसलाई दरबार हत्या का नामले समेत चिनिन्छ।
कोइराला मात्रै होइन जिवित अधिकांश नेपाली नेताले पनि यसलाई ठूलो ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’को संज्ञा दिने गरेका छन्। हाल राजनीतिको प्रभुत्वशाली स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले कोइरालाको जस्तै आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्।आफूहरुले त्यो हत्या काण्डको रहस्य बाहिर ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता पटक(पटक उनीहरुले जनाउने तर सत्तामा पुगेपछि सबै प्रतिबद्धता बिर्सने गरेका छन्।
दरबार हत्याकाण्डको रहस्य खोल्ने भन्दै पुस्तक लेखिए। तर ती पनि ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को सार्वजनिक विमर्शबाट टाढा रहन सकेनन्।हत्याकाण्डलाई लिएर जनताको मनोभावनाअनुरुपकै कुराहरुलाई ती पुस्तकमा उठाइए तर कुनैले पनि रहस्यको भरपर्दो दसी पेश गर्न सकेनन्।
← सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएकाले बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर → प्रधानमन्त्री ओली जेठ २५ गतेदेखि एक हप्ता लामो युरोप भ्रमणका क्रममा जानुहुने